Wordpress- စာမျက်နှာ2— MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်ပြောတာက root folder ကိုပြောတာ..........bythost မှာဘာလဲသိဘူး....:39: မေ့နေပြီ...:D
ပြောချင်တာကတော့ အစ်ကို wordpress ကို upload တင်ထားတဲ့ folder ကိုပြောတာပါ ။ အဲဒီထဲမှာ
ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ wp-content ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ် ၊ wp-content folder ထဲမှာ themes folder
ရှိတယ် ။ အဲဒါကိုပြောတာပါ.......ပိုရှုပ်သွားမှာတော့သေချာတယ် ....:D
byethost မှာ .. public_html အစား .. htdocs ပါ ..
zip file ကိုဖြည်ပြီးမှတင်ရမှာပါ ။ public_html folder ထဲက wp-content ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာ themes
ဆိုတဲ့ folder ရှိတယ် ။ အဲဒီထဲကိုတင်ပေးရမှာပါ ။
upload the zip file?
wordpress ဘလော့မှာ Themes က်ုပြောင်းချင်ပါတယ်...
အဆင့်လေးတွေကို လူပိန်းနာလည်းနည်းနဲ့ ရှင်းပြပါလား..
(မေးထားတာလေးများဖြေထားပြီလာလို့ လာကြည့်ပါတယ်..ဘယ်သူမှအရေမလုပ်ကြဘူး...အမ်ဇက်မှ ပညာရှင်များ မတွေတာလား..မဖြေကြတာလားဗျာ....:((:((:((:((:((
၁။ ကြိုက်တဲ့ theme တခုကို ဒေါင်း။ ဇစ်ဖြည်
၂။ ဇစ်ဖြည်ထားတဲ့ ဖိုလ်ဒါ တခုလုံးကို wp-content > themes ဖိုလ်ဒါထဲ ထည့်ပေး
၃။ wp-admin ၀င်ပြီး Appearance > Themes ကို ကလစ်လိုက်။ အသစ်တင်ထားတဲ့ theme ကိုတွေ့မယ်။
အဲဒါကို ကလစ်လုပ်။ ညာဘက်အပေါ်ဒေါင့်နားမှာ Activate ဆိုတာကို ထပ်ကလစ်။
မှတ်ချက်။ ငိုနေတာတွေ့လို့ ၀င်ဖြေလိုက်ပါကြောင်း။
မှန်ပါတယ်..ဇူးလူး ပြောသလိုပါပဲ..လုပ်ကြည့်ပါတယ်...မရကြောင်းပါ..အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်..wp-content> themes ဖိုလ်ဒါက php file များကို တစ်ခုချင်းပဲ လက်ခံကြောင်းပါ...FTP software နဲ့မှ ရကြောင်း မိတ်ဆွေတစ်ယောက်မှ ပြောပါတယ်..ဒါပင်မယ့် မလုပ်တက်သေးပါ.( မသုံးတက်သေး) FTP software တွေကို မသုံးတက်တာအပြင်...ကိုနတ်ရှင်က လည်းစိတ်ဆိုးနေလို့လို ပြောပါတယ်...ဒါကြောင့်မရတာပါတဲ့...အခုလို သိတာကိုေ၀မျှပေးေ၀တာကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...နောက်လည်းမသိရှိတာများကို ကူညီဖြေရှင်းပေးစေလိုပါကြောင်း...
မြန်မာအသံ..သတင်းကြေငြာချက်ကို ကိုးကားပြီး စာပြန်ရေးလိုက်ပါတယ်..:)
ကိုသွင်းလိုက်လေ။ ပြီးရင် Theme အောက်က Install ကနေ သွင်းလို့ရသွားလိမ့်မယ်။ Plugin တော့ www.net2ftp.com ကနေ upload တင်လိုက်ပါ။ FTP မရှိရင်တော့ net2ftp.com ကိုပဲ အားကိုးရမှာပေါ့